Goolhaye Alphonse Areola oo ka gudbay tijaabada caafimaad oo uu u maray Kooxda Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 01 Sebt 2019. Goolhayaha kooxda Paris Saint-Germain ee Alphonse Areola ayaa lagu soo waramayaa inuu tijaabada caafimaadka u maray Real Madrid ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxda ku ciyaarta garoonka Bernabeu.
26-sano jirkaan, kaasoo in ka badan 100 jeer u ciyaaray PSG tartammada oo dhan ayaa la la xiriirinayaa inuu u wareegayo Los Blancos taasoo qeyb ka ah heshiis isweydaarsiga goolhaye Keylor Navas.
Areola ayaa ku bilaawday mid kasta oo ka mid ah saddexdii kulan ee PSG oo ugu horreeyay horyaalka Ligue 1 xilli ciyaareedkii 2019-20 ka hor inta aan laga reebin kulanka ay wajahayso kooxda Metz Jimcaha, taasoo sii hurineysa soo jeedintii ahayd inuu baxo iyo ku biiristiisa kooxda Real Madrid.
Sida laga soo xigtay Warsidaha El Chringuito, xiddiga heerka caalami ee dalka France ayaa ka gudbay tijaabada caafimaadka kooxda uu hoggaamiyo Tababare Zinedine Zidane ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxda ka dhisan Caasimadda Spain.
Areola ayaa la rajeynayaa inuu dooqa labaad u noqon doono Real Madrid isaga oo ka dambeyn doona goolhaye Thibaut Courtois kaasoo dooqa koowaad u ah naadiga ku ciyaarta garoonka Bernabeu, waana doorkii uu Navas sheegay in uusan diyaar u ahayn xilli ciyaareedkan.
Madrid ayaa isku dayi doonta inay gaarto guusheedii labaad ee La Liga marka ay u safraan Villarreal habeenka Axadda, waxaana ay rajaynayaan in ay ka faa’iideystaan fursadda sanadkan uga banaan hanashada horyaalka Spain, maadaama aysan Barcelona ahayn koox isku toosan oo aysan u muuqan koox horyaalka difaacan karta in kastoo aan wax waliba la saadaalin karin haatan.
Waa maxay sababta uu hal Garsoore u dhex-dhexaadiyo kulammada kubadda cagta?... (Goormee ayey soo bilaabatay, imise garsoore ayaase kulammada garsoori jiray markii hore?)
Mourinho oo saadaaliyay qaabka loogu tartami doono hanashada Horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan